कसले फ्याक्यो यी अबोध बालिकालाई? पुष्पाले भाबुक हुदै नया खुलासा गरिन! (मार्मिक भिडियो) – Complete Nepali News Portal
कसले फ्याक्यो यी अबोध बालिकालाई? पुष्पाले भाबुक हुदै नया खुलासा गरिन! (मार्मिक भिडियो)
काठमाडौं , कपनको चौरमा छेउको झाडीमा एउटा बिष्कुटको कार्टुन भित्र न्यानो कपडाले शरीर पूरै बेरिएको अवस्थामा एउटा बच्चा भेटिएको थियो। उक्त बच्चा अहिले केयर बाल गृहमा पुष्पा अधिकारीको संरक्षणमा राखिएको छ। चौरमा खेल्ने क्रममा केटाकेटीले बच्चा देखे पछि आफ्नी आमा पुष्पा लाई फोन गरेर बोलाएका थिए। पुष्पाले ‘केयर बाल गृह’ मा १५ बालिका र एक बालकको हेरचाह गर्दै आउनु भएको छ।
वास्तवमा को हुन् सामाजीसेवी भनिने पुष्पा अधिकारी लगायत विस्तृत जानकारी सहित फरक कुरा कानी को भिडियो अंतर्बरता पुरा हेर्नुहोस !